Yakamisikidzwa-Arc Welding Wires Vagadziri & Vanotengesa - China Yakatemerwa-Arc Welding Wires Factory
ER304 uesd mubhavhu rinodziya sunlight pombi
ER310 yezvakasiyana-siyana MIG309L simbi welding
H08A (EL12) nyoro simbi waya yeiyo yakadzika arc welding
ER70S-4 Inoshandiswa kune weld yakakwira tensile simbi pa 490N / mm2 ...
Akapusa Welding Wireing Wire ER44-8
H08MnA (EM12) yekugadzira fenicha kana ...
ER70S-G the welded seamu ine yakanyanya kukwirira uye ...
H08MnMoA (EA2) yekutambisa inopisa yakakungurutswa pamwe nesimbi yemaitiro
Chishandiso: Yekutengesa inopisa yakakungurutswa uye yakajairwa simbi, senge 15MnVN, 15MnVNR, 15MnTiRe Inokodzera pombi-mutsara simbi yekuwachisa senge X60, X65 nezvimwe.
H10Mn2 (EH14) yakadzika yeArc welding waya
H10MnSi (EM13K) shandisa yakadzika kabhoni simbi uye yakaderera alloy iron welded chimiro
Izvo zvakakosha kune kutonhora kwe low low carbon simbi uye yakaderera alloy iron welded chimiro, senge boiler. kudzvanya chikepe, simba renyukireya chirimwa midziyo.we kupa mahara samples uye mahara consultant. Isu tinotengawo ese edu zvigadzirwa inishuwarenzi. Iwe uchave uwane bhizinesi rekuchengetedza.
H08MnA (EM12) yekugadzira fenicha kana yekumanikidza midziyo
EM12 (H08MnA) rudzi rwemhare nyoro yesimbi yeiyo yakadzika arc welding. Welding pamwe chete yakakodzera flux, iyo inomesa waya inokwanisa kuwana yakanakisa fenicha zvimiro.
H08CrMoVA yekuchengetera pombi
H13CrMoA (EB2) Yewelding inopisa inopesana nemidziyo yemidziyo nemapombi
tinoita bvunzo yakawanda. semuenzaniso .tensile simba, elongation, V-mhando uye zvichingodaro.
H08CrMoA yekutakurisa kupisa-kupesana nemadziya epombi uye mapaipi